Shina: Ny aterineto ho toy ny kianjan’ny ady ideolojika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2019 3:34 GMT
Araka ny tatitra, sady hametraka ny loharanom-baovao ary hanitatra ny fahefan'ny polisy hanara-maso ny Aterineto any amin'ny faritra (fa tsy ny tanàndehibe sy ny faritany ihany) ny Minisiteran'ny Filaminam-bahoaka. Hanara-maso akaiky ireo vondrona QQ sy ny famahanana bilaogy madinika mba hisorohana ny fiketrehana heloka bevava ihany koa izy ireo ankoatra ny fanaraha-maso ny sehatra fifanakalozan-kevitra, ny bilaogy ary ny tranonkala .
Nanamafy ihany koa ny tatitra ofisialy fa sady mahita ny aterineto ho teknolojia vaovao/media vaovao ny governemanta Shinoa, no mahita azy ihany koa ho sehatry ny ady ideolojika. Ny dingana manaraka amin'ny fanaraha-maso ny aterineto dia amin'ny alalan'ireo fitsipika ara-dalàna, ara-pitantanana, ara-toekarena ary ara-teknolojika hikendrena ireo orinasan'ny Fifandraisandavitra, ny mpamatsy tolotra aterineto ary ny mpanjifa mpisera.
Natao tamin'ny 18 Desambra 2009 ny valan-dresaka an-tserasera nasionaly ary nanatrika ny fivoriana ny antoko politika sy ny manampahefanan'ny governemanta avy amin'ny ambaratonga rehetra, nanomboka hatrany amin'ny faritra. Midika ho fanaraha-maso ny fifandraisana avy eny amin'ny ambaratonga ifotony ny fanitarana ny fanaraha-maso ny aterineto/finday any amin'ny faritra. Ary natao hanamafisana ny fanaraha-maso ideolojika ihany koa izany ankoatra ny fisorohana ny heloka bevava.
Tatitra mifandraika aminy amin'ny teny Shinoa avy amin'ny RFI